बालकेश्वर ठाकुर , सह प्रध्यापक, रा.रा.ब.क्याम्पस
भौगोलिक र जातिय संकीर्णता बोकेको संसारको कुनै पनि भाषा सर्वगतत्व प्राप्त गर्न सक्दैन, र त्यो राष्ट्र भाषा पनि हुन सक्दैन । संसारभरि ६५००० भाषाहरु छन् ।तर सबै राष्ट्र भाषा हुन सकेका छैनन् । नेपालमा १२३ भाषाहरु अभिलिखित छन् तर हिन्दी वाहेक अरु कुनै पनि भाषामा सर्वव्यापकता छैन । नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, मगही÷मगधी, बज्जिका आदि जातिय र भौगोलिक विशेषता सूचक भाषाहरु हुन र त्यसैले यिनीहरु मध्ये कुनै सम्पूर्ण राष्ट्रको भाषा बन्न सकेका छैनन । जवर्जस्तीको कुरा छोडौं । मगर, तमाङ्ग, लिम्बू, खूम्बू समुदायहरुका आफ्ना भाषाहरु छन् र यी भाषाहरु तिनीहरुमै सिमित छन् । मधेसमा बस्ने समुदायहरु एउटै भाषा परिवारका भएकाले भाग्यमानी छन् । मैथिली, भोजपुरी, मगधी बज्जिका आदिका जननी संस्कृत नै हो । नेपाली पनि विशुद्ध रुपले यसै परिवार को छ । तर यस भाषाका प्रयोगकत्र्ताले जवर्जस्ती सम्पूर्ण नेपाली समुदायहरुमा यो भाषा थोपारेर गलती गरेको कुरा नकार्न सकिंदैन ।मधेशका केही मुख्य भौगोलिक र जातिय विशेषता सूचक भाषाको संदर्भ कोट्याउन आवश्यक छ । माडवारीहरुले बोल्ने माडवारी भाषा÷बोली उनीहरुको विशेष पहिचान हो । अरु समुदाय र जातिहरुले यस भाषाप्रति सम्मान दर्शाएका छन् र दर्शाउनु पनि पर्दछ ।यो भाषा उहाँहरुको धरोहर हो भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । संसारका जुन कुनामा गए पनि उहाँहरुले आफ्नो भाषालाई जीवित राख्नु भएको छ । यो अति अभिनन्दनीय कुरो हो । यसै गरि नढाँटी भन्नु पर्दा मैथिली भाषा खास गरी ब्राम्हण र कायस्थहरुको विशेषता बोकेको भाषा हो भन्नेमा दुईमत हुनै सक्दैन । जनकपुर उप–महानगरपालिका भित्र संग–संगै जन्मे र हुर्केका ब्राम्हण र कायस्थ भन्दा अरु जातिहरुको आवाज भिन्न पाइन्छ । यो भाषाप्रति अन्य सबै समुदायको समादरपूर्ण भाव हुनु पर्दछ । यी भाषाका प्रयोगकर्ताहरुले नै यो भूखण्डको ज्ञानको दियो जलाएका हुन् । तर यथार्थ त यथार्थ हुन्छ । मैथिलीले व्यापकता हासिल गर्न सकेको अवस्था छैन । यसको प्रसार जनकपुरको पश्चिम भएको छैन । महोत्तरीको पश्चिम र सर्लाहीको पूर्वी भागमा मगधीले यसलाई छेकिसकेको छ । बारा, पर्सा र रौतहटमा सिमित छ भोजपुरी र सर्लाहीमा आएर सेलाई सकेको छ ।सम्पूर्ण मधेसमा क्षेत्रगत र जातिगत विशेषताका आधारमा एउटै भाषा÷बोलीमा भिन्नताहरु छन् ।नेपाली भाषाको अवस्थानेपाली भाषा मगही, मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका र अबधी भन्दा पनि कान्छो छ । यो भाषाका जनक भानुभक्त र उनका केही अनुजहरु हुन् । उहाँहरुले संपुष्ट स्वस्थ बालकको रुपमा जन्माएको नेपाली संस्कृत र हिन्दीको पढाई बन्द हुनासाथै सबलहुनसकेन । वास्तवमा नेपालीलाई नेवार, तमाङ्ग, मगर, लिम्बू, समुदायहरुले पनि स्वीकार नगरी सकेको अवस्था छ । यी सब कुरा भनि रहँदा नेपाली भाषा प्रति अनादर पैदा गर्नु होइन । तर यथार्थ त यथार्थ नै हुन्छ । यो भाषाका स्रष्टाहरु र यसलाई अपनाउने समुदायहरुप्रति हाम्रो अगाध सम्मान छ ।राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय भाषा हुनुका दुइटा प्रमुख आधारहरु हुन्छन् । पहिलो त्यस भाषामा कलम चलाउने कीर्तिकारहरुको प्रभविष्णुता एवं विभुता र दोस्रो त्यो भाषाको अनुकूलनशीलताको गुण । अंग्रेजी संसारको अनुज भाषाको श्रेणीमा परेपनि यसका महान लेखकहरुले यसलाई राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय गौरव प्रदान गरे । यो भाषामा अनुकूलनशीलताको अद्भुत गुणछ । अंग्रेजी भाषालाई समृद्ध बनाउन उदार अंग्रेजहरुले लैटिन, ग्रीक र फ्रेन्च भाषाहरुबाट औँधी मात्रामा शब्दहरु पैंचो लिए । संसारका अरुभाषाहरुबाट पनि शब्दहरु उधारो लिएर आज संसारलाई अन्तराष्ट्रिय भाषा दिएका छन् । संख्याको हिसाबले भन्ने हो भने चाइनिज र स्पैनिश प्रथम स्थानमा रहेपनि भौगोलिक र जातिय संकीर्णताका कारणहरुले गर्दा यिनीहरु अन्तराष्ट्रिय भाषाहरु हुन सकेनन ।हिन्दीका विशेषता र अवस्थाहिन्दी स्वयं देवहरुका देव महादेव द्वारा अभिमंत्रित भाषा हो भन्ने कुराको प्रसंग यसै ’जनकपुर टुडे’ समाचारपत्र मार्फत २०७४ साल माघ १५ गते मैले सोदाहरण प्रस्तुत गरी सकेको कुरा अवगतार्थ सबैमा अनुरोध छ । यो लेख मेरो त्यो लेखको उत्तरकथा हो । हिन्दी भाषाका प्रमुख जनकहरु गौस्वामी तुलसी दास, रहीम र कबिर हुन् । यिनीहरु सम्पूर्ण विशाल आर्यावर्तका प्रवर्तक हुन् भन्ने कुरामा द्विमत हुन सक्दैन । हाम्रो पहिचान भनेकै उहाँहरुका कृतिहरुमा छ । मधेस तुलासीमय,रहीममय र कबिरमय छ भन्ने कुरा शासक वर्गले नबुझे मधेसीले बुझ्ने कि न बुझ्ने ? उनीहरु द्वारा प्रदत्त भाषा बोल्ने कि न बोल्ने ? यिनीहरुको नाउँमा नेपालमा चौक, शलिकादि न हुनु पर्ने ? बाल काण्डको दोहा नं. ३० (क) र (ख) पढे पछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि तुलसीदास नेपालको वाराह क्षेत्रमा नरहर्यानन्दसंग राम कथा सुनी संसारकै सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ श्री रामचरितमानसको रचना गरे ।भारत विस्तारवादको कपोलकल्पित हौवा खडा गरेर सम्पूर्ण मधेसको पहिचानलाई मटियामेट गर्न कसैले पनि दुःसाहस गर्नु हुँदैन । हिन्दी नेपालको जुन सुकै ठाउँमा बोल्न र बुझ्न सकिन्छ । हिन्दी कुनै जातको भाषा नभई सम्पूर्ण आर्यावर्तको भाषा हो । नेपाली र अंग्रेजी नबुझ्नेका लागि हिन्दी नै ज्ञानार्जनको माध्यम हो । तुलसी, रहीम र कबिर हाम्रा हुन् । उनीहरुले बोलेको भाषा हाम्रो हो । यिनीहरु हाम्रा पहिचान हुन् । तसर्थ हिन्दी राष्ट्र भाषा हुनु पर्दछ